AGM: OBN Dirree Sagagalummaa fi Qabeenya Taayyef Addisuu Tayuun Saaxilame – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAGM: OBN Dirree Sagagalummaa fi Qabeenya Taayyef Addisuu Tayuun Saaxilame
AGM: Oduu Sinbirtuu nugeetten OBN Dirree Sagagalummaa fi Qabeenya Taayyef Addisuu Tayuun Saaxilame
# DUBBIIN IFA TA’EE JIRA #
Qabsoon butameera; mirga qabna jennee tikfannu of harkaa hin qabnu; reeffa ilmaan keenyaa lakkaawuu , ebelufaa hidhamaniiruu jennee gabaasnee fixuu sadarkaa dandeenyu irra hin jirru. Mana keenyatti nutti roorrifamaa jira. Maatii keenya tikfachuu, du’aa fi reebicha irraa oolfachuu hin dandeenye.
Qabeenyi keenya saamamuu irraa hin oolle. Tuffatamuun keenya hin hafne. Qe’ee keenyatti orma taanee jirra. Obsi keenya sodaa fakkaateera, dhugaadhasi. Ijoolleen hiyyeessaa nuti mirga isaaniif falminuuf kaayyoo ormaa bakkaan gahuuf gara jabinaan saba ofiirratti bobba’anii jiru. Haalli nuti keessa jirru isa gaafa qabsoo Diddaa Gabrummaa jalqabneetiin gadi tahee jira.
Kun itti fufuu hin qabu. Yoo itti fufe, hanga har’a geenyu bor gahuu akka hin dandeenye beekuu qabna. Oromoon haalli akka kanatti akka itti fufamu barbaadu jira jennee hin amannu. Kanaaf, qabsoo haala keessa jirruun wal gitu atattamaan eegaluun barbaachisaadha. Dursa namuu waan isarraa eegamu beekuu fi qooda ofii bahuu barbaachisa. Haaluma kanaan:
1. Yeroo ammaa kana sabboontotaa fi sabboonummaa Oromoo cabsanii daangaa Oromiyaa diiganii sirna Nafxanyaa deebisanii ijaaruuf duulli kallattii hundaan jalqabamuu isaa Oromoo marti hubachuu qaba.
2. Oolee haabulu malee Oromoonni Bilxiginnaa keessa jiran kanneen olaantummaa Nafxanyaa fudhachuuf qophii hin taane, haleellaan kan isaanii hin oolle tahuu beekanii yeroodhaan uummata isaanii araarfatanii qabsoo isaa bira dhaabbachuun barbaachisaadha.
3. Ajajoonni fi qondaaltonni Humna Addaa Oromiyaa fi Poolisiin Oromiyaa warri amma ajaja kennuudhaan saba ofii ajjeesisaa fi dararsiisaa jirtan, ergama keessan eega xumurattaniin booda ormi akka isinumatti deebi’u tasuma dagachuu hin qabdan. Kanaaf, yeroodhaan qalbii keessanitti deebi’aatii saba keessan bira dhaabbadhaa.
4. Miseensonni Poolisii fi Humna Addaa Oromiyaas ergamtoota ormaarraa ajaja fudhattanii saba miidhamaa keessaa baatanii fi deebitanii bor keessa jiraattan dararuu fi ajjeesuu akka dhaabdan.
5. Qeerroo fi Qarreen Oromoo bakka hundatti argamtu akkuma kaleessa mirga sabakeetiif wareegama qaalii kaffalaa turte har’as duula sirna dulloomaa deebisanii sitti fe’uuf gaggeeffamaa jiru jala dhaabbachuuf muuxannoo qabsoo karaa nagaa armaan dura kuufattetti fayyadamtee qolachuuf qophaa’i.
6. Dargaggoonni Oromoo qaama kamiinuu seeraan ala yoo waamaman, yoo rukutaman, yoo salphifaman akka aadaa Oromootti itti birmachuun, irraa buusuun, wajjiin aarsaa kafaluun barbaachisaadha. Salphinni tokkoo salphina hundaati.
7. Qotee bulaan bakka kamittiyyuu argamu humna nageenyaa naannoo isaa qubatee jiruuf qallaba akka safaru yoo gaafatame tasuma kennuu hin qabu.
8. Hojjettoonni mootummaa fi beektonni naannoo jiraattanitti dhiittaa mirga namoomaa, ajjeechaa, reebichaa fi hidhaa humnoota adda addaan gaggeeffamu suuraan, sagaleedhaan, suur-sagaleedhaan, barreeffamaan ragaa qabattanii gabaasuudhaan qooda keessan akka baatan.
9. Dhaabbileen amantaa fi ogeeyyiin fayyaa baraiisa amantii fi ogummaa keessanitti cichuudhaan ragaalee namoota du’anii fi balaan irra gahee gara keessan dhufee sirnaan akka qabattan.
10. Abbootii Gadaa fi Jaarsoliin Biyyaa dhiibbaa qaama kamiifiyyuu osoo hin jilbeenfatin dhugaadhaa fi qajeelummaadhaan kan dogoggore gorsitanii, kan dabe qajeelchuudhaan saba keessan tiksuudhaan imaana keessan akka eegdan isin yaadachiifna.
Barri jal’inaa ni raawwata!
በኦሮሙማ አሰላለፍ ላይ የተደረግ ውይይት ኤርሚያስ ለገሰና ብሩክ ይባስ